“ Lion King” အတွက်ထုတ်လုပ်မှုကိုဖန်တီးရန် Rob Legato က Blackmagic ဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ရော့ Legato "ဒီခြင်္သေ့ဘုရင်" အဘို့ရဲ့ Virtual ထုတ်လုပ်မှု Create ရန် Blackmagic ဒီဇိုင်းအသုံးပြု
ရော့ Legato "ဒီခြင်္သေ့ဘုရင်" အဘို့ရဲ့ Virtual ထုတ်လုပ်မှု Create ရန် Blackmagic ဒီဇိုင်းအသုံးပြု
Fremont, California ပြည်နယ် - အင်္ဂါနေ့, စက်တင်ဘာလ 24, 2019 - Blackmagic ဒီဇိုင်း အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူးရော့ Legato ၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုကြောင်းယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် Blackmagic ဒီဇိုင်း ဒစ္စနေးရဲ့များအတွက်ကို virtual ထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးရန်ထုတ်ကုန်က "ခြင်္သေ့ဘုရင်ဖြစ်တော်မူ၏။ " Jon Favreau ဒါရိုက်တာနှင့် Donald ဂလိုဗာနှင့် Beyonce Knowles-Carter က၏အသံတပ်ဆင်ထားခဲ့သောအဆိုပါရုပ်ရှင်, င်း၏ဇူလိုင်လ 1.5, 19 ကတည်းကကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနီးပါး $ 2019 ဘီလီယံခန့်ရရှိထားပြီးပါပြီ အဖွင့်။
ရရှိနိုင်သည့်နည်းပညာသည်ယနေ့နှင့်အတူတစ် 3D ကာတွန်း feature ကိုရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကာတွန်းအသင်းထံမှစမ်းသပ် animations တွေကိုအဘို့စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်မရှိပါ။ အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူးရော့ Legato တစ်ခု အကယ်ဒမီဆုချီးမြှင့် ထိုကဲ့သို့သော "ဟူဂို" နဲ့ "တောတွင်းစာအုပ်" အဖြစ်ရုပ်ရှင်အဘို့အဆုရှင်အသစ်တစ်ခုအဆင့်နည်းပညာကို ယူ. , ရိုးရာရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးတိုက်ရိုက်အရေးယူအစုံပေါ်တွေ့ရတဲ့အကျွမ်းတဝင် tools တွေကိုသုံးပြီးဒစ်ဂျစ်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့တဲ့အာကာသဖန်တီးချင်တယ်။ "ဒီရည်မှန်းချက်ကွန်ပျူတာများတွင်တစ်ဦးချင်းစီကိုပစ်ခတ် generate မှမဟုတ်ခဲ့," "သူကတကယ့်အစုဖြစ်လျှင်အဖြစ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ပေမယ့်။ " Legato ကလည်း,
အနာဂတ်မင်းကြီးသည်မာနသည်ကျောက်ထရံပေါ်မှာလက်ျာရာအရပျယူဆသစ္စာဖောက်များနှင့်အဖြစ်ဆိုးကျော်လွှားရမယ်ရှိရာအာဖရိကဆာဗားနားမှပြန်တစ်ခုလုံးအသစ်အလမ်းအတွက်ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်ဇာတ်လမ်းခရီးချစ်ရာသခင်သည်ဇာတ်ကောင်မြင်၏။ ယင်း၏အချိန်များအတွက် 1994D ကာတွန်းတစ်ခုအံ့သြဖွယ်အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်သည့်ဒစ္စနေး Animation ရဲ့ထံမှမူရင်း2ရုပ်ရှင်လိုပဲ 2019 ဗားရှင်းအဆင့်မြင့်ကွန်ပျူတာဂရပ်ဖစ်အသုံးချဖို့ဒီအချိန်ဟာဘယ်တော့မှမတိုင်မီအစစ်လားထင်ရတဲ့စတိုင်ကိုတှေ့မွငျဖနျတီးဖို့တစ်ကြိမ်ပိုမိုခေတ်မီနည်းပညာ၏အစွမ်းအတွန်း။ သို့သော်နောက်ဆုံးကြည့်တဘက်, စီမံကိန်းတခုဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းကို virtual ပတ်ဝန်းကျင်အသုံးချဖို့, ထုတ်လုပ်မှုစဉ်အတွင်းအပါအဝင်တစ်လျှောက်လုံးနည်းပညာအသစ်နှုတ်ဆက်ပြီး။
ထုတ်လုပ်မှုဇာတ်စင်ရှိရာ "ဒီခြင်္သေ့ဘုရင်" အဓိကကြမ်းပြင်နှင့်စည်းပတ်ပတ်လည်ကွန်ပျူတာများကိုနောက်ကွယ်မှပညာရှင်များတွေရဲ့ array ဖြည့်ဆည်းပုံမှန်မဟုတ်သော devices များနှင့်အတူ, ထူးဆန်းတဲ့ကြည့်ရှုစေခြင်းငှါ, သေနတ်, ဒါပေမယ့်အဲဒီလုပ်ငန်းစဉ်၏ဖွင့်အရိုးတို့ကိုရှိကြ၏ခဲ့သည်။ သေနတ်ပစ်စတင်, ဒါရိုက်တာ Jon Favreau နှင့်ရိုက်ကူးရေးခေါင်းဆောင်ကာလက် Deschanel Mufasa နှင့် Simba ရဲ့ virtual world မှာသူတို့ကိုနေရာချကြောင်းဟက်ဝတ်ဆင်။
အဲဒီအစားဒစ်ဂျစ်တယ် tools တွေနဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရန်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးအတင်းအကျပ်ထက်, Legato ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုပြင်ထားသော ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး က virtual world အတွင်းအလုပ်လုပ်ရန် devices များ။ တစ်ဦးကရိန်းယူနစ်ကွန်ပျူတာတိကျစွာကွန်ပျူတာအတွက်၎င်း၏ရွေ့လျားမှုထပ်ဖွခွင့်ပြုခြေရာခံခြင်း devices များနှင့်အတူပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ တောင်မှတစ် Steadicam Deschanel တိုက်ရိုက်အရေးယူရိုက်ကူးကဲ့သို့တူညီသော tools များနှင့်အတူနီးပါးကင်မရာရွှေ့ဖို့ခွင့်ပြုသည့်အတွက်ယူဆောင်ခဲ့သညျ။ အဆိုပါရည်မှန်းချက်တစ်ဦးစင်မြင့်ပေါ်ပေမယ့်ကွန်ပျူတာထဲမှာမယ့်တည်ရှိကြောင်းစံ tools တွေကိုသုံးပြီးထုတ်လုပ်မှုရိုးရာလမ်းအတွက်ဖန်တီးစေခဲ့သည်။ "သင်ကွန်ပျူတာအတွင်းလုံးဝကင်မရာကိုရွှေ့မယ်လို့ vis ရိုးရာကြိုတင်ခုနှစ်တွင်" Legato ကဆိုသည်။ "ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကို virtual ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကျနော်တို့စာသားစင်မြင့်ပေါ်မှာခြေရာခံ Dolly ချပြီးလျှင်, ကဒစ်ဂျစ်တယ်အစုံအပေါ်တိကျစွာကိုယ်စားပြုခဲ့ပါတယ်။ "
Blackmagic ဒီဇိုင်း ရိုးရှင်းစွာစနစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်ကျောရိုး, က virtual world များအတွက်အခြေခံအဆောက်အဦအဖြစ်တစ်ဖွဲ့လုံးကစတူဒီယိုပေး။ "ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးတစျခုလုံးကိုအဆောက်အဦများအတွက် routing ကိုဗီဒီယိုအဖြစ် Blackmagic ထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြု," အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်သူ, Matt Rubin က "ဟုပြောသည်နှင့်သက်သေကိုကင်မရာများအဖြစ် Micro နဲ့စတူဒီယိုကင်မရာ 4Ks မှတဆင့် DeckLink ကတ်များကို အသုံးပြု. အဖွဲ့ကသေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ရိုက်ကူးဖမ်းယူကနေ, ဗီဒီယိုကိုင်တွယ်မှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုစင်မြင့်မှာ ထိုကဲ့သို့သော ATEM ထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယို 4K နှင့် ATEM ရုပ်မြင်သံကြားစတူဒီယိုအဖြစ်, Teranex စံချိန်စံညွှန်းများ converters အဖြစ်နှင့်အမျိုးမျိုးသော ATEM ကဗီဒီယို switcher HD။ "
အယ်ဒီတာ့အာဘော်နဲ့အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုနှစ်မျိုးလုံးဌာနများကိုစိစစ်အခန်းကိုဝင်ရောက်အဖြစ်ရိုက်ချက်များများအတွက်စိစစ်မှုအခန်းသတင်းရင်းမြစ်အဖြစ်လုပ်ရပ်ခွင့်ပြုရန်စမတ် Videohubs router များမှတဆင့်အတူတကွ networked ခဲ့ကြသည်။ ကွန်ပျူတာက virtual ပတ်ဝန်းကျင်နေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အဖြစ်ကို virtual ထုတ်လုပ်မှုစဉ်အတွင်း, DeckLink ဖမ်းယူခြင်းနှင့်ပြန်ဖွင့်ကတ်များရိုက်ကူးဖမ်းယူခြင်းနှင့်ဗွီဒီယိုတစ်ခု network ကတဆင့်ကစားတစ်ထိန်းချုပ်မှုဘူတာရုံသို့အစာကျွေးခြင်းနှင့် HyperDeck စတူဒီယို Mini အပေါ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။
ရိုက်ကူးကွန်ပျူတာများပေါ်ကိုသေနတ်နှင့်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်တပြိုင်နက်, setup ကိုအစစ်လားထင်ရတဲ့ပုံရိပ်ကိုဖန်တီးရန်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုကုမ္ပဏီ MPC ကကူးလှည့်ခဲ့ပါတယ်။ ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်ရက်စွဲပြင်ဆင်ရန်တစ်ခုတက်ထိန်းသိမ်းခြင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံး Legato နဲ့သူ့အဖွဲ့အသုံးပြုသွားမည် DaVinci Legato နောက်ဆုံး colorists မှလမ်းပြအဖြစ်ရိုက်ချက်များမှအရောင်လျှောက်ထားအတူနှစ်ခုအစုံအတွက်အဆင့်မြင့် Panel များဖြေရှင်းစတူဒီယိုနှင့် DaVinci ဖြေရှင်း။ အဆိုပါ DaVinci ဖြေရှင်းရန်စီမံကိန်းကိုမကြာခဏ MPC ကမှအသစ်ရိုက်ကူးနှင့်အတူအကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ရက် updated ခဲ့သည်။ Legato သာမဟုတ်ဘဲတစ်ဦးချင်းစီရိုက်ချက်များဖေါ်ပြခြင်းထက်, ဖြတ်၏အခြေအနေတွင် Favreau အဘို့အပြ, ဒါကြောင့်တစ်ဦးချောမွေ့စိစစ်အတွေ့အကြုံကိုပေးရိုက်ချက်များဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်ရန်အရေးကြီးပါသည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစက်ရုံသည်စက်ရုံတဝိုက်အမျိုးမျိုးသောအဖွဲ့သည်အင်္ဂါများစိစစ်တဲ့အခန်းကိုတက်ချည်ခြင်းမရှိဘဲတူညီသောအချိန်ဇယားကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုမယ့် DaVinci ဖြေရှင်းရန်ဒေတာဘေ့စ shared ။
လုံးဝနီးပါးရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးဖို့အသုံးပြုဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းစနစ်များနေသော်လည်းနောက်ဆုံးထုတ်ကုန်၏စစ်မှန်တဲ့အနုပညာပုံစံကိုထင်ဟပ် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးရိုးရိုးလေးရုပ်ရှင်ပညာနှင့်တစ်လျှောက်လုံးတစ်ဦးဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းအသွားအလာအဘို့ကိုမှန်ကန် tools များပေးအပ်သည်။ "ဒီကို virtual ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ရိုက်ကူးဖို့အမှန်တကယ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကမ္ဘာကြီးကိုဖန်တီး," Legato ကဆိုသည်။ "ကာလကျနေ့က၏ညာဘက်အချိန်, ဒါမှမဟုတ်သစ်ပင်များနေရာသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်မှုစဉ်အတွင်းအပိုင်းပိုင်းသတ်မှတ်ထားနိုင်အနုပညာဒါရိုက်တာအောင်မြင်ရန်နေရောင်ရွှေ့နိုင်ဖြစ်ခြင်း မှစ. က virtual world ကိုရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးဖို့အံ့သြဖွယ်ပလက်ဖောင်းခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ဒါဟာကျိန်းသေအမျိုးအစားအသစ်တစ်မျိုးခဲ့ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး, စံထုတ်လုပ်မှု၏အပေါငျးတို့သထောင်ချောက်နှင့်တသားတ, ဒါပေမယ့်တီထွင်ဖန်တီးမှုဖြစ် ပို. ပင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်။ "
DaVinci ၏ကုန်ပစ္စည်းဓါတ်ပုံအဆင့်မြင့် Panel ကို, Micro နဲ့စတူဒီယိုကင်မရာ 4K, ATEM ထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယို 4K, Smart Videohub, Teranex Express, HyperDeck စတူဒီယို Mini နဲ့ရှိသမျှသည်အခြားသောဖြေရှင်းစတူဒီယို, DaVinci ဖြေရှင်း Blackmagic ဒီဇိုင်း ထုတ်ကုန်မှာရရှိနိုင်ပါ www.blackmagicdesign.com/media/images ။
Interactive YouTube Game Show“ Quizuna” သည် Live Streaming အတွက် ATEM Mini Pro ပေါ်တွင်မှီခိုသည် - မေလ 26, 2020
Jasmine Ash ၏“ တူညီသောနေရောင်” ဗီဒီယိုရိုက်ချက်ကို Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K နှင့် Blackmagic RAW - မေလ 26, 2020
Blackmagic Design မှ Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K Update ကိုကြေငြာခဲ့သည် - မေလ 26, 2020
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ATEM ထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယို 4K ATEM ရုပ်မြင်သံကြားစတူဒီယို HD ကို Blackmagic ဒီဇိုင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia CES2017 တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor MStar post ကိုထုတ်လုပ်မှု SJGolden - SoftAtHome လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို တီဗီနည်းပညာ TVU ကွန်ယက် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-09-24
ယခင်: Encore ဗန်ကူးဗားမှလှို Colorist ဂျင်မီ Hsu
နောက်တစ်ခု: မိုက်ကရိုဆော့ဖ Lectrosonics နှင့်အတူစစ်ပွဲ၏ Gear ကိုနှစ်မြောက်မွေးနေ့